Imibhalo ka-Ian Cleary mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge U-Ian Cleary
Ukumaketha kwangaphakathi kuhle. Udala okuqukethwe. Ushayela ithrafikhi kuwebhusayithi yakho. Uguqula enye yaleyo thrafikhi uthengise imikhiqizo nezinsizakalo zakho. Kepha… Iqiniso ukuthi kunzima kakhulu kunakuqala ukuthola imiphumela yekhasi lokuqala le-Google nokushayela ithrafikhi ephilayo. Ukumaketha kokuqukethwe kuya ngokuncintisana okukhulu. Ukufinyelela okungokwemvelo eziteshini zemithombo yezokuxhumana kuyaqhubeka nokwehla. Ngakho-ke uma nawe uqaphele ukuthi ukumaketha okungenayo akusanele, uzodinga
I-PRISM: Uhlaka Lokuthuthukisa Ukuguqulwa Kwakho Kwemidiya Yezenhlalo
NgoLwesithathu, Novemba 2, 2016 NgoLwesine, ngoMashi 4, 2021 U-Ian Cleary
Iqiniso ukuthi ngokujwayelekile awuthengisi eziteshini zemithombo yezokuxhumana kepha ungakhiqiza ukuthengisa okuvela ezinkundleni zokuxhumana uma usebenzisa inqubo ephelele yokuqeda. Uhlaka lwethu lwe-PRISM 5 isinyathelo inqubo ongayisebenzisa ukwenza ngcono ukuguqulwa kwemithombo yezokuxhumana. Kule ndatshana sizokhipha uhlaka lwezinyathelo ezi-5 bese sihamba ngamathuluzi esibonelo ongawasebenzisa esinyathelweni ngasinye senqubo. Nayi i-PRISM: Ukwakha i-PRISM yakho wena
Ibhulogi ingaba ngumthombo omkhulu wethrafikhi kuwebhusayithi yakho, kepha kuyadla isikhathi ukudala okuthunyelwe kwebhulogi futhi asihlali siyithola imiphumela esiyifunayo. Uma wenza ibhulogi, ufuna ukuqiniseka ukuthi uthola inani eliphakeme kuyo. Kulesi sihloko, sichaze amathuluzi ama-5 azosiza ekuthuthukiseni imiphumela yakho ekubhulogi, okuholele kuthrafikhi eningi futhi, ekugcineni, ukuthengisa. 1. Dala isithombe sakho usebenzisa i-Canva An isithombe sithwebula